Unicode Start with 'U'...
unicode on my mind
ယူနီကုဒ်စနစ် အပြောင်းအလဲကို ဦးဆောင်မည့်သူ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ…?
မြန်မာဇော်ဂျီစာရိုက်စနစ် ကနေ မြန်မာယူနီကုဒ်စာရိုက်စနစ် ကို ပြောင်းဖို့ တိုက်တွန်းကြည့်မိတဲ့အခါ အသုံးပြုသူ(Users) အများစုက ပြောင်းလဲချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိနေတာကို ဝမ်းမြောက်စွာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ သို့သော် သူတို့တွင် အခက်အခဲ ကြီးြကီးမားမား (၂)ခု ရှိနေသည်က ပက်သက်ဆက်ဆံရမည့် ပတ်ဝန်းကျင်က “ဇော်ဂျီ” အများစု ဖြစ်နေခြင်းနှင့် နိစ္စဓူဝ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနေသော Social media သတင်း ဝဘ်ဆိုက်အများစုက ဇော်ဂျီနှင့် ရေးသားဖော်ပြထားခြင်း စတဲ့ ရှောင်လွဲမရတဲ့ အခက်အခဲတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။
အချို့ Users များက “ယူနီကုဒ်စနစ်နဲ့ ပြောင်းလဲရေးကို နာမည်ကြီး လူဖတ်များ ပါဝါရှိတဲ့ သတင်းမီဒီယာ ဝဘ်ဆိုက်တွေ နဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင် (Celebrity) ေတွကသာ စပြီးေပြာင်းလဲရင် အများကပါ လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲလာကြလိမ့်မယ်” လို့ ေပြာဆိုကြတာေတွ ရှိပါတယ်…။
“မှန်သင့် သလောက်ေတာ့လဲ မှန်ပါတယ်..” ဒါပေမယ့်….
တစ်ကယ်ကတော့ သတင်း ဝဘ်ဆိုက်ေတွမှာလဲ အခက်အခဲေတွ အများကြီးရှိတယ် ဆိုတာကို ကိုယ့်ေတွ့အ​ေနနဲ့ ရှင်းပြပါရစေ…
ယူနီကုဒ် မဖွံ့ဖြိုးလာစဥ်ထဲက “ဇော်ဂျီဖောင့်” နဲ့ စတင်တည်ေထာင်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်း (၆)နှစ်ခန့် ရှိသော သတင်း ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှာ ေဆာင်းပါးေပါင်း ‘ထောင်ေသာင်းချီ’ ၍ ရှိေနနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီ ​ေဆာင်းပါးများ အားလုံးကို ချက်ခြင်းတစ်ပြိုင်တည်း “ယူနီကုဒ်စနစ်” သို့ ပြန်လည်ေပြာင်းလဲရမယ့် ကိစ္စမှာ လုပ်လို့ရသည် ရှိခဲ့ရင်ေတာင် နောက်ထပ်အခက်အခဲ တစ်ခုမှာ ဝဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ေရာက်ဖတ်ရှုသူ အရေအတွက် လေျှာ့ကျသွားနိုင်သလို စီးပွားေရးနှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ အကေြာင်းအရာများလည်း ရှိေနနိုင်ပါေသးတယ်..။
တစ်ဖန် “ဇော်ဂျီ၊ ယူနီကုဒ်” ပြောင်းလဲရေးထက် ပိုမိုအ​ေရးကြီးေသာ သတင်းအချက်လက်များကို ပြည်သူထံ အမြန်ဆုံး တင်ပြေပေးပို့နိုင်မှုကို ထိခိုက်စရာ အကေြာင်းများလည်း ရှိေကာင်းရှိနိုင်ပါတယ်..။
ဒီနေရာမှာ သတင်း ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ဘလောခ့်များ အနေနှင့် အားလုံးအဆင်ပြေအောင် လုပ်လို့ရတာ တစ်ခုရှိပါသည် “ဇော်ဂျီ” နှင့် ေရးသည်ဖြစ်ေစ “ယူနီ” နှင့် ေရးသည်ဖြစ်ေစ… (ေရးချင်တာနဲ့ ေရးပါ) မိမိတို့ရဲ့ ဝဘ်ဆိုက်၊ ဘေလောခ့်ေတွမှာ “Font Embedded, EOT, Font Face” ပုံစံများနှင့် မိမိအသုံးပြုေရးသားေသာ ေဖာင့်ကို တစ်ခါထဲချုပ်ပြီး ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ယခုလို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မည်သည့် မြန်မာစာေဖာင့်မျှ သွင်းထားခြင်း မရှိ​ေသာ Computers, Mobiles အားလုံးတို့မှာ အငြင်းပွားစရာမရှိပဲ (ဖောင့်မလိုပဲ) မှန်ကန်စွာ ဖတ်ရှုနို်င်ပါလိမ့်မည်..။ (အကြံပြုခြင်းမျှသာ… ပိုမိုထိေရာက် ေကာင်းမွန်ေသာ အခြားနည်းလမ်းများလည်း ရှိေနနိုင်ပါေသးသည်)
ထို့ေကြာင့် နာမည်ကြီး ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ဘလောခ့်များက စတင်၍ မှန်ကန်ေကာင်းမွန်ေသာ မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်သို့ စတင်ကာ ဦးေဆာင်ေပြာင်းလဲ လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ေတာ့်အေနနှင့် မယုံကြည်ပါ… သူတို့သည် အချိန်မရေွး ေပြာင်းလဲနိုင်ေသာ်လည်း အများပြည်သူများ၏ အရိပ်အခြေ အရေွ့ကိုသာ ေစာင့်ဆိုင်းေနပါလိမ့်မည်… အများက ယူနီကုဒ်မှသာ သူတို့အနေနှင့် အထက်ပါ အကြောင်းများကြောင့် လိုက်ကုဒ်နိုင်ပါလိမ့်မည်…။
“မည်သည့် မြန်မာဖောင့်မှ သွင်းထားရန် မလိုပဲ ဖတ်ရှုနိုင်သော ကျွန်တော်သိသလောက် မြန်မာဆိုက်များ”
− 7daydaily.com − burmese.dvb.no − rfa.org − bbc.com/burmese − nldchairperson.org − carsdb.com − moethagyarr.info nayzaraung.com
Advance User အချို့ကလည်း.. “Developers တွေကသာ ဇော်ဂျီကို (လုံးဝ) မထောက်ပံ့တော့ရင်၊ နောက်ဆုံး converter တွေကအစ မထုတ်ပေးတော့ရင် ယူနီကုဒ်စနစ်ကို လူတွေက မပြောင်းမဖြစ် ပြောင်းကို ပြောင်းလာကြမှာ..”
ဒီအတွေးမျိုး၊ ဒီစကားမျိုး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း တွေးခဲ့၊ ပြောခဲ့ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် Developers တွေ နေရာက ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ၊ သူတို့က ထောက်ပံ့သူ (Supporter role) ကပဲ Users တွေ ဘာလိုနေလဲ လိုတာကို ဖန်တီးပေးမယ်၊ ရေးသားတီထွင်ပေးမယ် စတဲ့ Users တွေရဲ့ အရိပ်အခြေကို ကြည့်ပြီး လိုအပ်တာဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ ပညာရှင်သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ် သို့သော် လူအနည်းစုဖြစ်ပြီး မညီညာတဲ့အတွက် ထိရောက်မှု အားနည်းပါတယ်)
ယခုအခါ Users တွေက “ယူနီကုဒ်” ကို စိတ်င်စားတာ များလာရတဲ့အတွက် “ZawDicode” “NamKhone” စတဲ့ “ဇော်ဂျီယူနီ” နှစ်မျိုးမြင်ဖောင့်တွေ၊ Converter, Browser extension စတာတွေကို ဖန်တီးရေးသား ထုတ်ပေးလာခဲ့ပါတယ်…။ ထို့ေကြာင့် Developers များက ဦးဆောင်၍ မှန်ကန်ေကာင်းမွန်ေသာ မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်သို့ စတင်ကာ ​ေပြာင်းလဲ နိုင်လိမ့်မည်ဆိုသည့် အယူအဆမှာလည်း မမှန်ကန်နိုင်ပါ…
သည်လိုဆိုမှဖြင့် မြန်မာယူနီကုဒ် စနစ်ကို မည်သူက ဦးဆောင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါမည်နည်…?
Users တွေ ကိုယ်တိုင်ကသာ စတင် ဦးဆောင်ရွေ့လျှားမှသာ ဤခရီးနီးပါတော့မည်။ အနာဂါတ်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ြမန်မာစာ ယူနီကုဒ်စနစ်သည် ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ၏ လက်ဖြင့် ကိုယ်တိုင် သယ်ဆောင်မှသာ အဆင့်မှီသော၊ နိုင်ငံတစ်ကာမှ လက်ခံသော ြမန်မာစာစနစ်တစ်ခု အဖြစ် အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နိုင်ပါလိမ့်မည်..။
သင်တို့က ဦးဆောင်နိုင်မည်ဟု ထင်နေသော သူများသည် သင်၏ နောက်လိုက်များသာ ဖြစ်ပါသည်… သင်သည်သာ ခေါင်းဆောင်နိုင်သူ ဦးဆောင်နိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်ကို လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်လိုက်ပါ…
Unicode Start with “U”…!